किन अझै ३३ किलो सुन काण्डका ‘ठूला माछा’ कायस्थलाई जोगाइँदै छ ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»पत्रपत्रिका»किन अझै ३३ किलो सुन काण्डका ‘ठूला माछा’ कायस्थलाई जोगाइँदै छ ?
किन अझै ३३ किलो सुन काण्डका ‘ठूला माछा’ कायस्थलाई जोगाइँदै छ ?
By मनिषा थापा on ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १०:५० पत्रपत्रिका, समाचार
काठमाडौं : साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्यामा ठोस प्रमाण नै फेला नपरेपछि प्रहरीको अनुसन्धान र छानविन समिती पुर्वाग्राहि बनेको आरोप लागेको छ ।
सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयका सह-सचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिमा रहेका एसएसपी वसन्त लामाले तस्करीमा मुछिएका पूर्व एआईजी विजयलाल कायस्थलाई उन्मुक्ति दिलाउन भूमिका खेलेको स्रोतले बतायो । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
सुन तस्करी र शाक्य हत्याका मुख्य नाइके गोरे भन्ने चुँडामणी उप्रेतीसँग एयरपोर्टमा छँदा देखि नै एसएसपी श्याम खत्रीले साँठगाँठ गरेका थिए । खत्री र गोरे अहिले फरार छन् । खत्री एयरपोर्टमा रहँदा उनका हाकिम थिए तत्कालिन डिआईजी विजयलाल कायस्थ ।
कायस्थ १६ महिनासम्म सुन तस्करहरुकै सेटिङमा एयरपोर्टमै बसेका थिए । कायस्थका हरेक आदेश खत्रीले पालना गर्दै आएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि समितिले कायस्थलाई बयानका लागि बोलाएको छैन । लहरो तान्दा पहरो गर्जने भनेझैं कायस्थलाई आदेश दिने तत्कालिन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल पनि सुन तस्करी काण्डमा तानिने भएपछि कायस्थमाथि अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
कायस्थले एयरपोर्टमा रहँदा गोरेको सूचनाको आधारमा युवतीहरुलाई नै सुराकी राखेर झण्डै ४० किलो सुन बरामद गरेका थिए । गोरेको सूचनाको आधारमा सुन बरामद गर्दा भुजुङ गुरुङसँग मिलेर गोरेले नै टनका टन सुन तस्करी गरेका थिए । त्यसमा कायस्थको पनि मिलेमतो रहेको समिति स्रोत बताउँछ ।
सुन तस्करीमा विगत देखि नै मुछिदै आएका फरार एसएसपी श्याम खत्री र पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएका अन्य प्रहरीहरुलाई एउटै दाजोमा राखेर समितिले गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको छ । जुन सरासर गलत रहेको ती प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।